तपाईं FSX मा FS9 विमानहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
प्रश्न तपाईं FSX मा FS9 विमानहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
2 वर्ष2महिना पहिले #248 by JanneAir15
नमस्कार! म FSX मा FS9 विमानहरु प्रयोग गर्न सक्ने सुने। म जान्न चाहनुहुन्छ ताकि तपाईं FSX लागि फेला यो FSX यसलाई प्रयोग गर्न सम्भव छ गर्न सक्ने विशिष्ट विमान छन्। विमान परियोजना Airbus A321 Sharklet संस्करण हो। म पहिले नै केही विधिहरू यो स्थापना गर्न प्रयास गरेका छन् तर तिनीहरू काम गरेनन्। त्यसैले कसैले कृपया मलाई यो संग मदत गर्न सक्छ?
2 वर्ष2महिना पहिले #252 by Gh0stRider203
हो तिमि सक्छौ। फोल्डरमा केही FS9 भन्दा FSX मा एक बिट फरक हुन सक्छ। FSX मा, सबै मेरो विमान यहाँ जानुहोस्:
बी: \_ कार्यक्रम फाइलहरू (x86) \_ Microsoft उडान सिम्युलेटर एक्स \_ SimObjects \_ हवाईजहाज माइक्रोसफ्ट खेल \_
जहाँ तिनीहरूले FS9 मा स्थापना म सम्झना छैन। पनि बस निष्पक्ष चेतावनी। नहीं FS9 लागि सबै गेज FSX काम हुनेछ।